I-china 30ml amber light-proof Gourd-shaped skin care care essential oil dropper bottle Supplier and Manufacturer | I-Kingtone
I-30ml amber ekhanyayo enakekela isikhumba ukunakekelwa kwesikhumba ibhodlela elibalulekile lamafutha
Uhlobo lokubeka uphawu: I-Dropper
Sebenzisa: Amafutha Abalulekile
Inombolo imodeli: SL-334
Ukusetshenziswa: Ibhodlela Le-Diffuser Ebalulekile
Isici Ibhodlela le-oyela elibalulekile
Umbala ecacile noma yimuphi umbala
Ukuvikelwa kwe-UV: Ibhodlela lengilazi lenziwe ngengilazi yegolide emelana nokugqwala. Amabhodlela ethu awanayo i-BPA, ayiholeli, enengilazi yegolide emelana ne-UV ukuqinisekisa ukuthi amafutha akho abalulekile namakha avikeleke ngokuphelele ekulimaleni kwe-UV kanye nengozi yokuhwamuka ngokushesha.
Ifanele kakhulu i-aromatherapy: Isethi ngayinye yamabhodlela ifakwe ama-dropper ama-4, okukulungele ukugcwalisa amafutha abalulekile futhi wenze izingxube zakho zikawoyela ezibalulekile zokubhucungwa, i-hair salon, i-aromatherapy, futhi ujabulele izikhathi zakho eziyigugu zokuphumula.
Umklamo wobufakazi bokuvuza: Umlomo webhodlela lesikulufu ufakwe ikhava ebabazekayo eyenziwe ngegolide ene-aluminium ingxubevange, engafakwa eduze ukuvimbela ukuvuza okungamanzi.
Ibhodlela lengilazi elisebenza kabusha, eligcwaliswayo, elinobungani bemvelo nelisebenzayo nge-dropper yisipho esihle sabathandi bakawoyela ababalulekile, abangane noma izihlobo. Uma umkhiqizo owutholile ungonakalisiwe nganoma iyiphi indlela, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Usayizi wephakheji elilodwa: 5.8X5.8X13.2 cm
Langaphambilini 50ml umbala obalulekile wokunakekelwa kwesikhumba ingilazi yokudonsa ibhodlela
Olandelayo: Ukupakisha kwezimonyo okungamabhodlela ka-30ml okumnyama
Hot ethengisa dropper ibhodlela uwoyela kubalulekile ibhodlela ...
30ml amnyama kubalulekile uwoyela dropper ibhodlela yezimonyo ...
15ml amber ecacile ingilazi dropper ibhodlela
50ml umbala amafutha abalulekile isikhumba ukunakekelwa ingilazi droppe ...